UVerónica Roth: izincwadi | Izincwadi Zamanje
Kulabo abathanda izincwadi zobusha nezama-dystopi, lapho bethula khona ikusasa lemiphakathi, amakilasi, njll. Qiniseka igama le- UVeronica Roth nezincwadi zakhe kuyaziwa kubo.
Kodwa ngubani uVeronica Roth? Iziphi izincwadi ozibhalile? Uma ungamazi, noma kunalokho, uma wazi izincwadi zakhe ezidume kakhulu, sizokutshela ngakho konke akubhalile nange-biography yakhe.
1 Veronica Roth uyaba ubani?
2 Izincwadi zikaVeronica Roth
2.1 I-Divergent Trilogy
2.2 Izindaba ezimfishane ezihlobene neDivergent
2.3 Amamaki Okufa KweDuology
2.4 Isiphetho nokunye ukuqala: izindaba ezivela ngokuzayo
2.5 UDuology Sakhethwa
Veronica Roth uyaba ubani?
Umthombo: ibhulogi ehlukile
UVeronica Roth waphakama waduma nge-trilogy. Ngokuqondile, okuhlukile. Yayinjalo impumelelo ukuthi ngesikhathi esifushane bayenza ifilimu, futhi lokho kwaqhubekisela phambili umsebenzi walo mbhali waseMelika owazalwa ngo-1988. Impela, yazalwa ngubaba waseJalimane, u-Edgar Roth, nomama waseMelika, uBárbara URydz (ophinde abe ngowokuzalwa ePoland).
Su impilo yadlula iminyaka yokuqala eNew York, kodwa lapho abazali bakhe behlukanisa, nomama wakhe eshada futhi, wayehlala e-Illinois, eBarrington.
Njengoba emncane wayethanda ukubhala, futhi futhi wafunda. Umndeni wakhe ubumeseka kakhulu kwazise, ​​lapho bethola ukuthi unethalente lokubhala, bamkhuthaza ukuthi aqondise imizamo yakhe yokwenza ngcono futhi aqeqeshwe kuyo. Ngakho-ke wabhalisa eNyuvesi yaseNorthwestern lapho afunda khona "Ukubhala Okubhaliwe."
Uneziqu kulowo msebenzi futhi futhi waba yimbangela yokubhala incwadi yakhe yokuqala. Ekuqaleni kwakuwumbhalo nje omubi, indawo lapho athatha khona lokho akufunda emsebenzini wakhe ngenkathi ekusebenzisa njengesivikelo sokuphumula emisebenzini yasekolishi. Igama laleyo ncwadi? Kwehlukana. Empeleni, uVeronica Roth wathi okokuqala lapho ahlangana khona "nokuxhumana" naleyo ndaba kwakusendleleni eya eMinnesota, ekolishi.
Ngokusobala, wayishicilela, futhi kwaba yimpumelelo yokuthi ngo-2011 yaqashelwa emazweni ayi-15. Ngakho-ke, umemezele ukuthi kwakuyi-trilogy. Futhi u-2011 kube unyaka omuhle kumbhali njengoba eshada nomthwebuli wezithombe uNelson Fitzh.
Ngemuva konyaka wathola inkampani ekhiqiza amafilimu, ISummit Entertainment izoyibona leyo ncwadi, futhi uthengise ilungelo lobunikazi lokuguqula ifilimu. Ngawo lowo nyaka, esevele e-2012, wakhipha ingxenye yesibili, i-Insurgente.
Ngo-2013 kwaba ithuba likaLeal. Futhi impela uyazi ukuthi ukuguqulwa kwazo zonke izincwadi kwenziwa, okuvuna impumelelo enkulu.
Ngokuqondene nemiklomelo, kunemibili efanelekile. Ngakolunye uhlangothi, ngo-2011, lapho umphakathi waseGoodreads wawuklomelisa njengeNcwadi Eyintandokazi. Ngemuva konyaka, nakuGoodreads, yazuza izindondo zeBest Young Adult Science Fiction neFantasy Story.
Ngaphandle kwe-Divergent trilogy, uVerónica Roth uphinde washicilela amanye amanoveli, lawa abe nempumelelo encane ngoba awazwakalanga ngawo. Kodwa-ke, sizophawula ngabo ngezansi.
Izincwadi zikaVeronica Roth
Umthombo: Idolobha lezincwadi
Kusuka kuVerónica Roth, izincwadi ezinqobe ngempela futhi ezisho inguquko, aziziningi. Empeleni, kuphela ezintathu zokuqala azikhiphile, Ihlukane, ivukele futhi iqotho, zonke zivela ku-divergent trilogy.
Kodwa-ke, lokho akusho ukuthi umbhali uyekile ukushicilela, ukude nakho. Umsebenzi wakhe wokubhala waqala ngo-2011 futhi usaqhubeka ngo-2021. Ngakho-ke, sikutshela ngezincwadi zakhe.
Siqala ngezincwadi zokuqala zikaVerónica Roth, futhi lezi yi-Divergente (2011), Insurgente (2012) neLeal (2013). Bonke batshela indaba kaBeatrice, intombazane, esikhundleni sokuba namakhono eqenjini elilodwa lomphakathi wayo, eyayinabo bonke. Futhi lokho kwakuyingozi, ngisho nokugwetshwa intambo uma bethola imfihlo yakhe. Eceleni kwakhe, sinoCuatro, umngane we-protagonist.
I-trilogy yayishaywa ngezincwadi zama-dystopi. Eqinisweni, yaphuma ngasikhathi sinye neMidlalo Yendlala, eyenza impumelelo yayo yaba nkulu kakhulu.
Izindaba ezimfishane ezihlobene neDivergent
Ngemuva kokuphothulwa kwe-Divergent trilogy, uVerónica Roth uqhubeke nokunikeza "izipho" ezithile kubalandeli, futhi umphumela walokhu kwaba izindaba ezimfishane azikhiqizayo. Ngokwesibonelo, Okwesine: iqoqo lomlando we-Divergent, lapho ahlanganisa khona izindaba ezinhlanu ezimfushane ezazilandisa izingxenye zempilo yabane, noma umbono wakhe wezahluko ezithile zendaba yokuqala. Vele, kwakungekude kakhulu, ngoba yayingenamakhasi angama-257 (uma kuqhathaniswa ne-trilogy, cishe kwakungeyona incwadi yalena).
Izihloko zalezi zindaba ezinhlanu yilezi:
Amamaki Okufa KweDuology
Ngemuva kokuphothula i-Divergent, uVerónica Roth uzame inhlanhla ngendaba entsha, kulokhu i-duology, okungukuthi, izincwadi ezimbili: The Marks of Death, kusuka ku-2017; nezindawo ezahlukanisiwe, ngo-2018.
Indaba ayibanga nomthelela omkhulu, ngoba ayikashintshelwa kubhayisikobho. Kepha akuzange kube yizincwadi zokugcina zombhali.
Isiphetho nokunye ukuqala: izindaba ezivela ngokuzayo
Ngo-2019, ethembekile ekukhishweni kwencwadi minyaka yonke, umbhali washicilela i-The End kanye nezinye iziqalo: Izindaba ezivela ngekusasa. Yincwadi eyingqayizivele (eyokuqala ayenzayo) nokuthi yayiqukethe izindaba ezimfushane.
Ekugcineni, ngo-2020, umbhali waqala kabusha i-duology. Ngo-2020 wakhipha Sakhethwa futhi kulindeleke ukuthi incwadi elandelayo izophuma ngo-2021, yize kungekho lutho olusaziwa ngayo.
I-Hearken yindaba emfushane uVeronica Roth abambisene nayo kwi-dystopian story story anthology Shards & Ashes. Isakhiwo sizungeza i- a intombazane ethola ukufakwa kobuchopho futhi engalalela umculo walabo abafayo phakathi kwe-apocalypse.
UVerónica Roth akakashicileli okuningi, kepha unalo ikhasi lakhe elisemthethweni lapho uzothola khona izindaba azikhiphayo. Okwamanje, incwadi yakhe yakamuva ethi Sakhethwa, kepha asinqumi ukuthi kukhona isimemezelo mayelana nengxenye yesibili yale bilogy. Uyamthanda umbhali? Iziphi izincwadi ozifundile ngaye?
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Abalobi » UVeronica Roth: izincwadi